सिजी ल्याण्डमार्कमा के.एफ.सि.को चिकेन स्वाद…. – Saurahaonline.com
सिजी ल्याण्डमार्कमा के.एफ.सि.को चिकेन स्वाद….
चितवन : पोल्ट्रीको राजधानी चितवनमा चिकेन परिकारको नयाँ स्वाद आम उपभोक्ता माझ सहज उपलब्धताका लागि के.एफ.सीको नयाँ शाखा सिजि ल्याण्डमार्कमा सञ्चालनमा आएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय चेन रेस्टुँरा के.एफ.सि. शहर भित्रको शहर मानिने सि.जी. ल्यान्डमार्कको भुई तल्लमा सञ्चालनमा आएको हो ।
रेस्टुँरामा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न चिकेन परिकारहरुको आनन्द लिन सकिनेछ । के.एफ.सि.को नेपालका लागी आधिकारिक प्रतिनिधि देवयानी इन्टरनेशनलले नेपाल प्रा.लि.ले उक्त रेस्टुँरा सञ्चालनमा ल्याएको हो । एक भव्य समारोहका विच सिजि ल्याण्डमार्कका अध्यक्ष एवंम् युवा व्यवसायी राजेन्द्र अर्यालले रिवान काटेर के.एफ.सी चितवन शाखाको शुभारम्भ गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय व्राण्डहरुलाई चितवने ग्राहकमाझ सहज उपलब्ध गराउदै आएको सिजि ल्याण्डमार्कको पहलमा के.एफ.सी सञ्चालनले चितवने पोल्ट्री क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
आफ्नै गाँउ शहरमा अन्र्तराष्ट्रिय स्वादका पकिार पस्केर केएफसीले नयाँ सम्बन्ध बढाउने समेत उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा सिजि ल्याण्डमार्कका म्यानेजर उज्वल केसीले महल संस्कारमा आर्कषित बनेका चितवने ग्राहकवर्गहरुमा केएफसीको नयाँ शाखाले थप उचाई थप्ने दावी गरे । उनले सिजि सधै चितवनको व्यवसायीक विकासमा नयाँ नयाँ व्यवसायीक प्रर्वद्धनमा थप सशक्त रुपमा अगाडी बढ्ने समेत बताए ।
रेस्टुँराले कोभिड बाट बच्नकालागी अन्तराष्ट्रिय बिभिन्न चार स्तरका सुरक्षा मापदण्ड कायम गरेको छ । रेस्टुँरामा बन्ने सम्पुर्ण खानाहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बन्ने र सम्पुर्ण हिसाबले खाना गुणस्तरिय र सुरक्षित रहनेछन् ।
रेस्टुँरा १५१५ बर्गफिट क्षेत्रफमा सञ्चालनहुने र चालिस जना ग्राहकलाई एक पटकमा सेवा दिन सक्नेछ । रेस्टुँराले सुरुकै दिनबाट टेक अवे र मेरो किनमेल मार्फत होम डेलिभरी सेवा समेत सञ्चालन गरेको छ । रेस्टुँरामा १५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन् ।